Rwanda oo isticmaaleyso drones-ka si ay gargaar u gaarsiiso miyiga - BBC News Somali
Rwanda oo isticmaaleyso drones-ka si ay gargaar u gaarsiiso miyiga
14 Oktoobar 2016
Image caption Diyaardaha aan duuliyaha lahayn oo loo isticmaalayo in adeeg caafimaad lagu gaarsiiyo baadiyaha Rwanda
Markii ugu horreysay ayaa diyaaradaha Drones-ka loo yaqaano ee aan duuliyaha lahayn waxay qaadayaan dhiig dad loogu gargaarayo oo ay geynayaan dhulka miyiga ah.
Dalka Rwanda ayaa kireysatay shirikad Maraykanka laga leehay ah oo lagu magacaabo Zipline si ay u suurtagaliso in diyaarad yar oo aan duuliye lahayn lagana hagayo satelite-ka loo isticmaalo gargaarkan.
Dhiigan ayaa waxaa diyaaradda ka soo qaadaya baarshuut. Waxuuna dhiiga ku jiraa baakado oo diyaaradu ay hawada ka soo ridayso iyadoo baarashuutku uu soo xambaarayo.
Image caption Dhiig ku jira baakado ayay diyaaradu hawada ka soo ridayso iyadoo baarashuutku uu soo xambaarayo
Waxaa adeegan dhiigga lagu geynaya dhulalka fog fog ee dalka Rwanda maalgelisay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi.
Hadii howgalkan lagu guulaysto, diyaaradahan Drones-ka ah ee aan duuliyaha lahayn waxaa loo isticmaali doonaa in lagu qaado dawada talaalka iyo adeegyada kale ee dawaynta caafimaadka deg degga ah meelo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika